धनी बन्ने इच्छा छ ? धर्मशास्त्र भन्छ जिन्दगीमा कहिल्यै नगर्नुहोस् यी १० गल्ती – Krazy NepaL
May 4, 2021 571
काठमाडौँ । धनी बन्ने इच्छा सबैको हुन्छ । तर कसैलाई जति मेहनत गरेपनि आर्थिक संकट आइरहन्छ। मेहनत गरे अनुसार पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने शास्तुका केही नियमको पनि पालना गर्न जरुरी छ। आज हामी तपाईलाई गर्न नहुने केही गल्तीका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
१.महिलासँग दूश्मनी नलिनुहोस् । शुक्र भौतिक सुखका कारक ग्रह हो । साथै स्त्री प्रति शुक्रको प्रभाव रहनेगर्छ । यसैले शुक्र प्रधान यस वर्षमा महिलासँग राम्रो सम्बन्धमा रहनुहोस् ।
२.देवी लक्ष्मिको मुर्ति एक भन्दा धेरै आफ्नो कोठामा नराख्नुहोस् । शुक्रबारको दिन देवी लक्ष्मिको पुजा विशेष फलदायक मानिन्छ । तपाईंको घरमा धेरै देवीको मुर्ति छ भने आफ्नो सबै कोठाहरुमा अलग–अलग राख्नुहोस् । बाँकीलाई कतै विसर्जन गर्दिनुहोस् ।
३.यदि तपाईंको पर्स च्यातिएको छ भने त्यसलाई बदल्नुहोस् र काम नलाग्ने चीजहरुलाई फाल्नुहोस् । एउटा सिक्का शुक्रबारको दिन देवी लक्ष्मिको मन्दिरमा चढाउनुहोस् अर्को सिक्कालाई रातो कपडामा बेरेर पर्समा राख्नुहोस् ।
४. जीवनसाथीसँग तालमेल बनाइराख्नुहोस् । धन सम्बन्धी विषयमा जीवनसाथीसाग छलफल गरेर मात्रै फैसला गर्नुहोस् ।
यी ३ राशिका युवती हुन्छन् सबैभन्दा उत्तम, पहिलो भेटमै पुरुष हुन्छन्…
९.सोमबारको दिन पीपलको पुजा नगर्नुहोस् । यो दिन पीपलको पुजा गर्दा घरमा अलक्ष्मिको प्रवेश हुने विश्वास छ ।
Prevपेटमा बोसो बढेर दिक्क हुनुहुन्छ ? आजैबाट खानुहोस् यी खानेकुरा पाउनुहुनेछ भद्धा पेटबाट छुटकारा
Nextयी ४ राशिका पुरुषले श्रीमतीलाई रानी बनाएर राख्छन्
विहान उठ्नै वित्तिकै गर्नुहोस् यी काम, हुने छैन पैसाको कमी!!!!!!?